Ny Administrator FAA dia niresaka tamin'ny kaonferansa fiaramanidina sivily Azia-Pasifika tao Mongolia
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Ny Administrator FAA dia niresaka tamin'ny kaonferansa fiaramanidina sivily Azia-Pasifika tao Mongolia
Aogositra 8, 2017
Ny Administrator Federal Aviation Administration (FAA) Michael P. Huerta, izay niresaka tamin'ny kaonferansa fiaramanidina sivily Azia-Pasifika tao Mongolia androany, dia nilaza fa ny FAA sy ireo mpiara-miasa aminy Azia-Pasifika dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny fampiroboroboana ireo rafitra fanaraha-maso sy rafitra fanamarinana izay miantoka ny fiarovana ny mpandeha manerantany rehefa mitombo ny fangatahana.
Ny tetikasa FAA izay ao anatin'ny 20 taona dia hitombo 120 isan-jato ny isan'ireo mpandeha mivezivezy eo amin'ny faritra Azia-Pasifika sy Etazonia fotsiny.
"Amin'ny fizarana ny angona sy ny fomba fanao tsara indrindra dia noporofoinay fa tsy misy fetra ny fiarovana," hoy i Huerta. "Ilaina ny fiaraha-miasa mba hamaliana io fitakiana mitombo io sy hanaterana ny haavon'ny mpanjifa sy ny asa aman-draharaha amin'ny fiarovana sy ny serivisy amin'ny lafiny roa amin'ny Pasifika."
Ireo mpitarika sidina dia nivory tao amin'ny Fihaonamben'ny Jeneraly Asia-Pacific General of Aviation Aviation mba hiresaka momba ny hoavin'ny fiaramanidina sivily ao amin'ny faritra Azia-Pasifika. Niara-niasa tamin'ny faritra i Etazonia hatramin'ny nananganana biraon'ny fiaramanidina sivily tany Tokyo tamin'ny 1947.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo forum toy ny Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sy ny Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ny FAA dia miasa mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fifamoivoizana an'habakabaka any amin'ny faritra. Ohatra, amin'ny alàlan'ny fifamatorana amin'ny ASEAN, ny FAA dia miasa mba hanasongadinana ny lanjan'asa fizarana fampahalalana antontam-baovao eo amin'ny fanjakana aziatika.
Miaraka amin'ny APEC, ny FAA dia manara-penitra sy mampihatra ny teknolojia fitantanana fivezivezy vaovao sy fomba fanao tsara indrindra ahafahana mampihena ny fisarahana sy ny fivezivezin'ny fifamoivoizana. Ny FAA koa dia manohana ny fandraisana andraikitra isam-paritra hampihatra ny fomba fiasa mifototra amin'ny Performance-based, izay manafoana ny zotram-sidina, mamonjy fotoana ary mampihena ny entona.
Ny mpitarika ny faritra roa dia nanolo-tena hanatsara ny fahombiazan'ny rafitra fiaramanidina isam-pirenena amin'ny fotoana izay itohizan'ny teknolojia vaovao ny endrika vaovao momba ny fiaramanidina nentim-paharazana sy ny fifamoivoizana.
Ny sidina Doha-Sohar tsy misy fiatoana Qatar Airways voalohany dia mipaka any amin'ny seranam-piaramanidina Sohar
Tanàna manan-tantara ao Sarajevo hanatevin-daharana ny tambajotram-pivelarana manerantany Qatar Airways